Mabasa Evaapostora 19:1-41
Pauro muEfeso; vamwe vanhu vanobhabhatidzwa zvakare (1-7)
Kudzidzisa kwaPauro (8-10)
Kubudirira pasinei nechidhimoni (11-20)
Mhirizhonga muEfeso (21-41)
19 Aporo+ paakanga achiri muKorinde, Pauro akapfuura nemugwagwa waipinda mukati menyika, akadzika kuEfeso.+ Ikoko akawana vadzidzi 2 akati kwavari: “Makagamuchira mweya mutsvene here pamakava vatendi?”+ Vakamupindura kuti: “Aiwa, hatisati tambonzwa nezvemweya mutsvene isu.” 3 Akabva ati: “Saka makabhabhatidzwa rubhabhatidzo rupi?” Ivo vakati: “Rubhabhatidzo rwaJohani.”+ 4 Pauro akati: “Johani aibhabhatidza rubhabhatidzo rwekuratidza kupfidza zvivi,+ achiudza vanhu kuti vatende mune uya akanga achizouya shure kwake,+ kureva Jesu.” 5 Pavakanzwa izvi, vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu. 6 Pauro paakaisa maoko ake pavari, mweya mutsvene wakauya pavari,+ vakatanga kutaura mitauro isiri yavo uye kuprofita.+ 7 Vese pamwe chete vaiva varume vangasvika 12. 8 Akapinda musinagogi,+ akataura neushingi kwemwedzi mitatu, achikurukura nevanhu achivanyengetedza nekuvabatsira kunzwisisa pamusoro peUmambo hwaMwari.+ 9 Asi vamwe pavakaomesa musoro vachiramba kutenda, vachitaura zvakaipa pamusoro peNzira Iyi+ pamberi peruzhinji, akavasiya+ akaparadzanisa vadzidzi nevanhu ivavo, achikurukura navo zuva nezuva muimba yechikoro chaTirano. 10 Izvi zvakaitika kwemakore maviri, zvekuti vese vaigara munharaunda yeEzhiya vakanzwa shoko raShe, vaJudha nevaGiriki. 11 Uye Mwari akaramba achiita mabasa anoshamisa esimba achishandisa Pauro,+ 12 zvekuti kunyange machira nemaepuroni anenge agumha muviri wake, aiendeswa kuvanhu vanorwara,+ zvirwere zvavo zvopera, uye mweya yakaipa yaibuda.+ 13 Asi vamwe vaJudha vaifamba vachidzinga madhimoni vakaedzawo kushandisa zita raShe Jesu pane vaya vaiva nemweya yakaipa; vaiti: “Muzita raJesu anoparidzwa naPauro ndinokuudza kuti ubude.”+ 14 Kwaiva nevanakomana vanomwe vemumwe mutungamiriri wevapristi wechiJudha ainzi Skevha vaiita izvi. 15 Asi mweya wakaipa wakavapindura uchiti: “Jesu ndinomuziva+ uye Pauro ndinomuziva;+ asi imi ndimi vanaani?” 16 Murume aiva nemweya wakaipa akabva avasvetukira, akavarwisa akakurira mumwe nemumwe wavo, zvekuti vakatiza mumba imomo vasina kupfeka, vakuvara. 17 Izvi zvakazivikanwa nevanhu vese, vaJudha nevaGiriki vaigara muEfeso; uye vese vakatya, zita raShe Jesu rikaramba richikudzwa. 18 Uye vakawanda vakanga vava vatendi vaiuya vachireurura uye vachitaura pachena mabasa avo. 19 Uye vanhu vakawanda vaiita zvemashiripiti vakaunganidza mabhuku avo, vakaapisa pamberi pevanhu vese.+ Vakaverenga ukoshi hwawo vakaona achisvika mutengo wemasirivha 50 000. 20 Saka shoko raJehovha* rakaramba richikura zvine simba uye richikunda.+ 21 Pashure pacho Pauro akafunga mumwoyo make kuti aizopfuura nekuMakedhoniya+ neAkaya, achienda kuJerusarema.+ Akati: “Kana ndaenda ikoko, ndichafanira kuzoendawo kuRoma.”+ 22 Saka akatuma kuMakedhoniya vanhu vaviri vaimubatsira, Timoti+ naErasto,+ asi iye akambosara munharaunda yeEzhiya kwekanguva. 23 Mazuva iwayo kwakaita bongozozo+ chairo pamusoro peNzira Iyi.+ 24 Nekuti mumwe murume ainzi Dhemetriyo, mupfuri wesirivha, aigadzira tutemberi twesirivha twaAtemisi achiwanisa mhizha pfuma yakawanda.+ 25 Akadziunganidza pamwe chete nevamwe vaigadzirawo zvinhu zvakadaro, akati: “Varume, munonyatsoziva kuti basa iri ndiro rinotipfumisa. 26 Asi iye zvino muri kuona uye muri kunzwa kuti Pauro akafurira vanhu vakawanda, kwete muEfeso+ chete asi muruwa rwese rweEzhiya, achiita kuti vave nedzimwe pfungwa, achiti vanamwari vakagadzirwa nemaoko havasi vanamwari chaivo.+ 27 Uye dambudziko riripo harisi rekukanganiswa kwebhizimisi redu chete, asiwo kuti temberi yamwarikadzi mukuru Atemisi ichaonekwa seisina basa, uye mwari uyu anonamatwa muruwa rwese rweEzhiya nemunyika yese achabva abviswa kukudzwa kwake.” 28 Pavakanzwa izvi vakatsamwa kwazvo, vakatanga kushevedzera, vachiti: “Atemisi wevaEfeso mukuru!” 29 Saka guta rese rakaita nyonganyonga, uye vanhu vese vakamhanyira kunzvimbo yemitambo, vachizvuzvurudza Gayo naAristako,+ vaMakedhoniya vaifamba pamwe chete naPauro. 30 Pauro aida kupinda mukati maiva nevanhu, asi vadzidzi havana kumubvumira. 31 Kunyange vamwe vakuru vakuru vemitambo vaiwirirana naye, vakamutumira shoko vachimukumbira kuti asazvipinza pangozi nekupinda munzvimbo yemitambo. 32 Vanhu vakanga vava kuti uyu achidaidzira chino uyo achidaidzira icho; nekuti mhomho yese yakanga yangova nyonganyonga uye vakawanda vakanga vasingazivi kuti vakanga vaunganirei. 33 Saka vakabudisa Arekizanda pakati pevanhu, vaJudha vachimusundira mberi, uye Arekizanda akaedza kunyararidza vanhu neruoko rwake achida kuzvipindurira pamberi pavo. 34 Asi pavakaziva kuti akanga ari muJudha, vese vakatanga kushevedzera pamwe chete kwemaawa angasvika maviri vachiti: “Atemisi wevaEfeso mukuru!” 35 Munyori wezvaiitika muguta paakazonyararidza vanhu, akati: “Vanhu veEfeso, pavanhu vese ndiani asingazivi kuti guta revaEfeso ndiro rinochengeta temberi yaAtemisi mukuru nemufananidzo wakadonha uchibva kudenga? 36 Sezvo zvinhu izvi zvisingarambiki, munofanira kuramba makadzikama, musingaiti zvinhu musina kunyatsofunga. 37 Nekuti varume vamauya navo havasi mbavha dzetemberi kana kuti vanhu vanomhura mwarikadzi wedu. 38 Saka kana Dhemetriyo+ nemhizha dzaainadzo vaine nyaya yavari kupomera mumwe munhu, mazuva edare aripo uye magavhuna eruwa* aripo; ngavamhan’arirane. 39 Asi kana muri kutsvaga zvinopfuura izvozvo, zvinofanira kutongwa pakuungana kuri pamutemo. 40 Nekuti tinogona kupiwa mhosva yekupandukira hurumende nezvaitika nhasi izvi, sezvo tisina zvikonzero chaizvo zvekutaura kuti nei paita mhirizhonga iyi.” 41 Paakapedza kutaura mashoko aya, akaita kuti vanhu vaparare.